Nei Drones Dzichirova Korean Airlines Ndege? |
Location: musha » Kutumira » Nyika | Dunhu » Chammhembe Koria » Nei Drones Dzichirova Korean Airlines Ndege?
Kune dzakawanda ndege, drones injodzi yekuchengetedza. Kwete kune iyi Sky Tea nhengo dzendege. Korean Airlines inobhururuka kumaguta e120 munyika dze43, inoshandisa vanhu 20,000, uye yakatakura 27 mamiriyoni evatakuri muna 2019. Korean Airlines ichavimba chaizvo nemadrones kana mapoka ari nani e drones kuita kuti kuchengetedza kwayo kuve kwakachengeteka.
Korean Air, ine ruzivo rwakakura mukugadzirwa kwemotokari yemuchadenga ine vanhu uye isina munhu, yakagadzira tekinoroji inogona kuongorora ndege dzichishandisa drone swarms.
Korean Air yakaita chiitiko chekuratidzira tekinoroji yekuongorora ndege ichishandisa drone swarms muna Zvita pamuzinda wendege 'hangar.
Kuongororwa kwendege yeDrone kwakashandura zviga zvekugadzirisa uye kuri kuunzwa nendege pasi rese. Nepo nyanzvi dzekuchengetedza dzaimbofanirwa kuita cheki yekuona yefuselage yendege kubva pakakwirira kusvika kumamita makumi maviri, kuongorora kwe drone kunovandudza kuchengetedzwa kwenzvimbo yebasa uye kubvumidza kuwedzera kwechokwadi nekumhanya.
Korean Air yekuongorora ndege tekinoroji ndiyo yekutanga munyika kuendesa akawanda drones panguva imwe chete, kupfupisa nguva yekuchengetedza uye kuwedzera zvinoshamisa kugadzikana kwekushanda.
Ndege yakagadzira drone ine hupamhi hwemita imwe uye kureba, inorema 5.5 kg. Iyo fuselage yendege inogona kuongororwa uchishandisa ina yeaya ma drones panguva imwe chete. Kambani yakagadzirawo chirongwa chekushanda chinobvumira drones ina kuti igadziriswe kutora mifananidzo yenzvimbo dzakafanorongwa. Kana imwe yema drones ikatadza kushanda, sisitimu inogadziriswa kuti ipedze otomatiki mishoni uchishandisa ma drones asara.
Kana ma drones mana achishandiswa panguva imwe chete, nguva yakajairika yekutarisa kwemaawa angangoita gumi inogona kuderedzwa kusvika maawa mana, kuderera kwe10 muzana munguva, uye izvi zvichabatsira kuvandudza mashandiro ekufamba nendege. Uyezve, ma drones, ayo akashongedzerwa nemakamera epamusoro-soro, anogona kuona zvinhu zvinosvika 60 mm muhukuru, zvichibvumira kuonekwa kwehurema husingaonekwe kubva kumusoro neziso rakashama.
Korean Air inogovera data yekuongorora kuburikidza negore, zvichiita kuti vashandi vatarise zviri nyore mhedzisiro yekuongorora chero kupi uye chero nguva. Iyo ndege yakashandisawo kudhumhana-yekudzivirira system uye geo-fenzi kuchengetedza madaro akachengeteka kubva kunzvimbo dzakapoteredzwa uye kudzivirira kubvakacha kubva kunzvimbo yemishini.
Pamusoro pekugadzira tekinoroji iyi nyowani inoenderana nehurongwa hwehurumende hwekusimbisa kukwikwidza kweindasitiri yeMRO yendege, kambani yendege yakagadziridzawo mirau yekuvandudza maitiro ekugadzirisa drone sekuda kuvepo kwevashandi vekuchengetedza mukuwedzera kune vatyairi nevainjiniya.
Korean Air ichashanda kuvandudza kuchengetedzeka uye nyore kune vashandi, kudzikamisa mashandiro uye kuwedzera kurongeka kwekuongorora kuburikidza nemiedzo inoenderera isati yatanga zviri pamutemo drones yekuongorora gore rinouya.
Morocco inotangazve ndege dzevatakuri nenyika dzekunze
Zvitsva zvakawanikwa zvinoratidza hydration yekumusoro mhepo inoderedza ...